Imirhumo yeenkonzo zokusingathwa kunye nokulondolozwa kwe-OSF -AfrikaArXiv iyaqhubeka neenkonzo zayo --AfrikaArXiv
Vula Iziganeko zeNzululwazi (ext. Url)
E papashwe ngu NguJorem on 14hi ngoFebruwari 2020 14hi ngoFebruwari 2020
'Iiseva ezaziwayo zokuvalwa kobuso ngenxa yeengxaki zemali'
Iindaba zeNdalo, 1 Feb 2020, doi: 10.1038/d41586-020-00363-3
Le yintloko ye Inqaku leendaba zeNdalo izolo ethe yajongana neefizi zenkonzo ye-OSF.
I-AfricArXiv ilapha ukuhlala!
Siyaqhubeka neenkonzo zethu kunyaka ka-2020 kwaye sisebenza kwisicwangciso sendlela kunye nesicwangciso sezemali sokuxhasa imisebenzi ezayo kwaye singene kwiAfrikaArXiv kwindawo ekhulayo yeSayensi kwiLizwekazi lase-Afrika.
Simisele a iphepha lomrhumo apha kwiwebhusayithi yethu kunye nomkhankaso wokubuyisa imali eninzi kwiqonga leopencollective.com.
Vula ngokuDibeneyo liqonga apho abahlali banokuqokelela kwaye bathengise imali ngokusobala, ukuxhasa nokukhulisa iiprojekthi.
Igalelo lakho liya:
ukugubungela umrhumo wokubamba i-OSF kunye nokugcina
ucwangciso, ukuququzelela, kunye namaxwebhu eqonga leenkonzo ze -AfriArXiv
Inkxaso yokuhamba ukubonisa iAfrikaArXiv kwinkomfa
Iinkcukacha ezimbalwa ngakumbi kumxholo wethu 'waseAfrika'
NgoJuni ka-2018, thina isungule iAfricArXiv ngokubambisana neZiko leSayensi evulekileyo Ukusukela ngoko yamkele imibhalo-ngqangi eyi-100 kunye neposti, iingxelo zabafundi kunye nonxibelelwano olufutshane.
Ngo-2020, iZiko leSayensi eliVulelekileyo lacela ukuba siphakamise i-USD 999- yokusingathwa nokulondolozwa kweziseko zophuhliso ze-OSF kwaye baye banikwa inkxaso ekuchongeni iindlela kunye nezindululo zokubhala ngokubambisana nazo, umz. isibonelelo seNSF kunye a umnxeba ovela kwiChan Zuckerberg Initiative.
Isibhengezo somrhumo sasishukumisela ukuba sijonge ekuthelekiseni iinkonzo kunye neendleko ukuze sizazise ngento ekhoyo. Kwakhawuleza kwacaca ukuba sifuna ukubonelela nangaphezulu kunendlela enye yokukhetha abahlali ukuba babeke umsebenzi wabo. Sinombulelo kwi-COS ngokusungula iAfroArXiv kunye nathi kwaye yasenza ukuba sifike kule ndawo. Lixesha lokuba thina ke sikhule kwaye sandise ubuhlakani kwiinkalo ezahlukeneyo zesayensi evulekileyo kunye nokufikelela okuvulekileyo ukuze kubenze babe nokwenzeka kwaye babe bhetyebhetye kubaphandi kwilizwekazi laseAfrika. Sifuna ukuqhubeka nohambo kunye ne-COS kunye ulwakhiwo lwe-OSF, ethi ibonelele ngeenkonzo ezininzi ngaphandle kokugcina amaphepha okugcina; Oosonzululwazi banakho ukuqhuba umjikelo wabo weprojekthi kwi-OSF kubandakanya neenkcukacha, ubhaliso, kunye nenguqulo.
Okwangoku sisingatha phantse imisebenzi eli-100 eyamkelweyo, uninzi lwezandla, imibhalo embalwa, kunye neposta.
Olona lwando luphumeleleyo ngokubhekisele kokufunyenwe https://osf.io/preprints/africarxiv/y3bp7/ ngokukhuphela ngaphezulu kwe-1k
Nokuba ukuthathwa kuthatha kancinci, amalungelo okuqala afumana ngakumbi njengenyathelo elongezelelayo kupapasho lwejenali. Sisebenza kunye namaqabane ethu ukuqaqambisa abaphandi base-Afrika, ngakumbi, izibonelelo eziziswa kukunxibelelana kwezesayensi kwihlabathi liphela.
Iinkonzo zibiza imali, iyinyani. Siyakuqonda ukubaluleka kwaye kungumngeni kuwo wonke umntu obandakanyekayo kodwa nesifundo esihle sokucwangcisa isiseko esisebenzayo nesizinzileyo kwasekuqaleni. Njengoko imeko yemeko yezemfundo iyayakha kwakhona, bonke abathathi-nxaxheba kufuneka benze izibalo kwaye babone ukuba yeyiphi indlela efanelekileyo yokusasaza uhlahlo-lwabiwo mali kwaye ngubani ohlawula ntoni. Ngaphandle kwendleko ngqo kwiziseko zoncedo, zikho ezinye iindleko ezingathanga ngqo ezibandakanyekileyo ekubambeni kuqala kunye nokugcinwa, umz. Iinkonzo ezihlanganisiweyo eqongeni ezinikezelwa ngabantu besithathu, HR, ukuthengisa, njl.
Abanikeli, imiceli mngeni kunye namathuba
Okoko ukusungulwa kwethu, sityale izixhobo zethu (ixesha nemali) ukwakha iqonga, kubandakanya iwebhusayithi yethu kunye nokufikelela kubaphulaphuli ekujolise kubo. Sicinga ukuba abaphandi akufuneki babe ngabo abahlawulela iinkonzo zethu kwaye endaweni yoko, sifikelela kumathala eencwadi, oorhulumente, iziseko, kunye nabanikeli - bobabini base-Afrika nakwamanye amazwe. Ukufumana ukubuyiselwa kwemali, sibeke iphepha lomnikelo kwi https://info.africarxiv.org/contribute/ kwaye baphuhlisa isicwangciso esiliqili sokuxhasa ngemali kunye nemephu yendlela ka-2020 nakwiminyaka ezayo.
Ngenxa yemeko enzima kwilizwekazi, siqale ngokufunda malunga nabathathi-nxaxheba kwaye saba neengxoxo neengcali ezahlukeneyo. Sifuna ukusebenzisana nabathathi-nxaxheba base-Afrika ngokuyintloko kunye nokuxhasa igalelo lezemali kwilizwe jikelele. Ngo-Matshi 2020, sizimisele ukumilisela iphulo lethu lokubuyisa imali eluntwini kwaye silindele ukuthathwa ngokuzinzileyo kweminikelo ukuze sikwazi ukubhatala iindleko zethu eziqhubekayo kubandakanya umrhumo we-OSF wowama-2020.
Iimali zinqongophele ikakhulu e-Afrika kwaye ziboshwe kwihlabathi liphela kwizakhiwo eziphelelwe lixesha. Njengoko unxibelelwano lwabaphengululi lujika lubonakale ekuhleni nakwizenzo zeSayensi eziVulelekileyo kwihlabathi liphela sijolise kwilizwi elinamandla nelimanyeneyo ukusuka e-Afrika ukuya kulwakhiwo lwenkxaso-mali- umzekelo nge-IOI - https://investinopen.org/.
Imiceli mngeni ekuhlawuleni iindleko
Ukuthengisa kuwumsebenzi omninzi kwaye kubandakanya imali eninzi yokuhamba kwaye iiyure ezininzi ezityaliwe ukuqinisekisa ukuba abathathi-nxaxheba boPhando bafunda malunga nezibonelelo zokugcina ezingabandakanywa kuluntu lophando. Akunjalo kuphela e-Afrika, e-Latin America nase-Asia kodwa kwihlabathi liphela. Eminye imingeni kulo mmandla iquka ukunqongophala kwemali, imivuzo ephantsi yabasebenzi beHE kunye nentsilelo yeziseko zophuhliso. Uninzi loluntu lukhokela umsebenzi ngokuzithandela kwiiprakhtori zokuqala kwaye banezixhobo ezinqongopheleyo zokwenza umsebenzi oyimfuneko wokuxhasa ngengxowa-mali, yona ngokwayo nakwezinye iindawo ngumsebenzi osisigxina wamaqela amakhulu.
Isicwangciso-qhinga sethu sokuzinza kude kube ngoku
Ukongeza kwintsebenziswano yethu eqhubekayo neZiko leSayensi eliVulelekileyo ukusebenzisa iziseko zabo zokuqala ze-OSF, siye saguqula iqonga lethu ngokusebenzisana kunye neZenodo neScienceOpen. Oku kuvumela abaphandi base-Afrika ukuba bakhethe ugcino lwentandokazi yabo kwaye ngokusekelwe kwiimfuno zabo:
Ke ngoko, siya kuqhubeka nokusebenza ekuqinisekiseni ukuba iinkonzo zethu zangaphambi kwexesha ziyafumaneka kuluntu loPhando lwase-Afrika.
Iinkonzo ezithile nezongeziweyo kunye nezibonelelo ezibonelelwe liqonga ngalinye zidwelisiwe https://info.africarxiv.org/submit/.
Kwi-Zenodo, sisebenzisa iakhawunti yoluntu engahlawulelwanga ukuseta kunye nokugcina nabani na malunga nesihloko ngasinye.
Nge-ScienceOpen sinesivumelwano sokuba singasebenzisa iziseko zabo zasimahla zamahala ngonyaka wama-2020 kunye nokuphinda sazi malunga nokuphela konyaka. Ngaphezulu kwesango lokungenisa, inkqubo yophando kwi-ScienceOpen ine-standardised review yoontanga idityaniswe eyongeza elinye inqanaba lenkonzo.
I-OSF ibonelela ngokugcinwa kwedatha yomjikelezo wephrojekthi. Kuxhomekeke kwizazinzulu ukukhetha ukuba leliphi iqonga abalithandayo.
Ukuqala kwemisebenzi yeAfrikaArXiv, umbono wethu wexesha elide ibisoloko isenza iqonga elibanjelwe kwilizwekazi laseAfrika, ngokudibeneyo kumaziko ohlukeneyo ezophando kuwo wonke ummandla, ukuqinisekisa ubunini beziphumo zophando lwaseAfrika kunye nokuxhobisa abo babandakanyekayo kuphando lwaseAfrika. ukusebenzisana, kunye notshintshiselwano lolwazi kwinqanaba lehlabathi.
Sifikelela kwamanye amanyathelo, imibutho, kunye namahlakani ukwenza oku kwenzeke kungekudala. Nxibelelana nathi ukuze ubandakanyeke.
Simisele a iphepha lomrhumo kwiwebhusayithi yethu kunye ne-asociated Vula ngokuDibeneyo iphulo lokubuyisa imali eninzi.
Kwezi veki zimbalwa zizayo, siqala ukufikelela kwisicwangciso-qhinga sokunxibelelana nabathathi-nxaxheba kwimfundo ePhakamileyo yase-Afrika kunye noPhando kubulungu kunye nezivumelwano zobambiswano.
Qhagamshelana nathi Ukuxoxa malunga nemibono kunye neengcebiso: info@africarxiv.org.
tags: IZiko leNzululwazi eliVulelekileyoVula isakhelo seSayensiumrhumo wenkonzo
iindidi Khetha Udidi Umsitho (1) Jikelele (10) Ukwahluka kweeLwimi (1) Ukufikelela ngokuvulekileyo (9) Vula isayensi (8) Imbonakalo yangaphambili (5) Ushicilelo (4) Unxibelelwano lweSayensi (3) Ukungeniswa (4)
Imifuno yemveli yaseAfrika I-AfrikaOSH ASAPbio Berlin ukwakha amandla IZiko leNzululwazi eliVulelekileyo Nkomfa ICrastina Ukufunyanwa I-DIYbio Edinburgh Ukhuseleko lokutya YOBONWELEKILEYO ka-11 YOBONWELEKILEYO ka-2019 IGADE ulwimi iyantlukwano yolwimi Iindlela fikelela ufikelelo Vula iiJenali zokuFikelela Vula iiMephu zoLwazi uvulele isayensi Ingqungquthela yezeNzululwazi evulekileyo Vula isakhelo seSayensi Vula iSoftware Hardware osc2018 Nziswano Pearl Ihuoma Osirike Xa u ilungelo lokuqala ukupapasha ScienceOpen Ukubhalwa kweNzululwazi umrhumo wenkonzo yesayensi yoluntu nokuzinza I-TCC yase-Afrika uqeqesho ubushakashatsi
Buyela ngo-Epreli ngo-2018, umbono wokwakha indawo yokugcina yaseAfrika evulekileyo wazalwa kwinkomfa yokuqala ye-AfricaOSH eKumasi, eGhana. Olu phehlelelo lwalugutyungelwe i-ao ngesiNgesi ngu-Index Index, Quartz Africa, Funda ngokugqithisileyo…
Ekuqaleni kukaDisemba ngo-2019, uProf Abukutsu-Onyanko wazisa ngomsebenzi wakhe kwi-UTC-SPARC Africa Open Access Symposium 2019 Symposium eKapa, ​​eMzantsi Afrika. Jonga umboniso kuZenodo: Malunga neshumi leminyaka eyadlulayo, uLeslie Chan udliwanondlebe Funda ngokugqithisileyo…
Le bhlogi yathunyelwa iphuma kwi-ASAPbio kwaye iphinde isetyenziswe phantsi kwe-CC-BY 4.0 kwelayisensi. Nceda ukongeze naziphi na izimvo kunye neenkcazo malunga neposti yokuqala kwi-sapbio.org/force2019-preprints-vision-dinner. Ukulandela ingxoxo yephaneli malunga "Ngubani oya kuba nefuthe kwimpumelelo ye Funda ngokugqithisileyo…
Bhalisela iindaba zethu nge-imeyile
Ngenisa idilesi ye-imeyile yakho ukuze ubhalise kwiindaba zethu ngokuFumaneka okuvulekileyo e-Afrika kwaye ufumane izaziso nge-imeyile.